Smart Objects ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
David Fuentes | | Tutorials
Smart Objects Header ao amin'ny Photoshop
ny zavatra marani-tsaina dia ampahany amin'ny haitao Adobe (manomboka amin'ny kinova CS4 farafaharatsiny mandroso) izay ny hevi-dehibe dia ny fanovana sary tsy manimba. Na dia betsaka aza ny zavatra holazaina momba ny zavatra marani-tsaina.
Mba hijerena amin'ny fomba azo ampiharina ny fomba fiasan'ny Smart Objects, dia hanao fitsapana isan'andro izahay amin'ny Photoshop toy ny fanamafisana sary. Ao amin'ny sary santionany dia azonao atao ny mahita ny fahasamihafana misy eo amin'ny workflow sy tsy misy zavatra marani-tsaina. Amin'ny sary faharoa dia hitantsika ny fahaverezan'ny famahana sy ny pixelization avy eo, na dia amin'ny sary voalohany aza, hitantsika fa na dia nihena, nihalehibe ary nahena indray ary nanitatra io sary io ihany aza dia mbola mitazona ny kalitao tany am-boalohany.
Ohatra ohatra Smart Object
Sary ohatra rasterized
Efa fantatsika ny tombony voalohany sy lehibe an'ity teknolojia ity: mitahiry ny famahana ny sosona.
Raha hanova ny sosona ho zavatra marani-tsaina dia fidintsika ny sosona, tsindrio havanana ary safidio ny safidy "Avadiho ho zavatra marani-tsaina"
Photoshop sy Illustrator tena takatra tsara izy ireo, koa afaka mahazo tombony amin'ny Smart Objects isika rehefa miasa miaraka amin'ireo programa roa ireo amin'ny fotoana iray. Rehefa maka tahaka avy amin'ny Illustrator ary apetaka ao anaty Photoshop dia anontaniana izahay hoe ahoana no tianay apetaka io atiny io ary ny safidy voalohany miseho dia ny mametaka ho zavatra marani-tsaina. Ity dia fomba iray hafa handefasana ny asantsika satria, ho azy ireo fanovana natao tao amin'ny rakitra Illustrator, rehefa mitahiry vola, dia ho hita taratra ao amin'ny antontan-taratasy Photoshop izay iasantsika.
Inona avy ireo fomba hanovana ny sosona ho Smart Object? Maromaro.
Ny voalohany, efa voalaza tetsy ambony. Tsindrio ny sosona mahaliana antsika ary avadiho ho Smart Object.
Ny faharoa, avy amin'ny menio Layer-Smart Objects-Hanova ho Smart Object.
Ny fahatelo, avy amin'ny menio Sivana-Hanova avy amin'ny sivana marani-tsaina.
Ny fahefatra, avy amin'ny baikon'ny Place. File-Place. Afaka mampiasa sary na vektor izahay.
Misy zavatra hafa tokony ho fantatsika rehefa miasa amin'ny Smart Objects ary izany dia ny mahasamihafa ny dika mitovy. Raha manana zavatra marani-tsaina isika ary averintsika ny sosona, dia mamorona efitrano samihafa amin'io sosona io isika (zavatra toy ny marika ao amin'ny Flash na Edge Animate). Midika izany fa ireo fiovana vokarina dia ho hita taratra amin'ny kopian'ny sosona rehetra.
Na izany aza, raha te hanao fanovana tsy misy fiatraikany amin'ny sosona voalohany isika dia tsy maintsy mampiasa ny safidin'ny "Zavatra marani-tsaina vaovao amin'ny alàlan'ny kopia" avy amin'ny menio manodidina (tsindrio havanana amin'ny sosona). Ka mamorona sosona mahaleo tena tanteraka izahay. Mampiasà fomba roa rehefa ilaina.
Fitaovana famoronana lehibe ny sivana marani-tsaina. Manolotra antsika ny tombony lehibe amin'ny fitazonana ny fifehezana ireo sivana ampiharina amin'ny sosona amin'ny fotoana rehetra, amin'izay dia afaka manova ny masontsivana an'ny sivana resahina raha ilaina izany. Mba hanovana ny safidin'ny sivana ampiharina indray dia tsindrio indroa fotsiny ny anaran'ny sivana eo ambanin'ny sosona ary hisokatra ny varavarankely mifandraika amin'izany. Izy io dia fomba fiasa tsy manimba izay manome antsika vokatra lehibe.
Ny antsipiriany iray manan-danja dia ny ahafahantsika manolo ny atin'ny zavatra marani-tsaina amin'ny fipihana tsara eo amin'ny sosona ary misafidy io safidy io.
Ity dia fanolorana fohy momba ny fampiasana ny Smart Objects. Manoro hevitra anao ny hampihatra ny tenanao ary hahita zava-baovao amin'ny asanao isan'andro amin'ny Photoshop, hahazoana vokatra sy fahombiazana bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Smart Objects ao amin'ny Photoshop